I-16 yeDiploma ePhambili yokuPhumelela kuFundo kuLawulo lokuFunda kwi-2022
Nali inqaku elifutshane elifutshane kwidiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lweenkqubo zokufunda umgama nokuba yeyokuxubha izakhono zakho, ukongeza iziqinisekiso zakho zemfundo okanye ukufuna ithuba elitsha lomsebenzi.
Ulawulo sisakhono esifunekayo kwihlabathi lendibaniselwano, njengoko zonke iintlobo zeshishini zixhomekeke kubuchule bokutyhalela phambili kumbutho.
Ukuze iprojekthi okanye nawuphina umsebenzi wenziwe ngempumelelo, umphathi kuyafuneka ukuba abeke esweni imeko kwaye aqinisekise ukuba ihamba njengoko bekucwangcisiwe. Ukuqala ekuphunyezweni kweprojekthi ukuyihambisa, umphathi uyafuneka.
Abaphathi bazo zonke iintlobo, kukho iintlobo ezahlukeneyo zezikhundla zokuphatha, bezifunwa kakhulu okoko nje amashishini ebekhona kodwa emva kwexesha lihamba, ukutshintsha kweemodeli zeshishini- ekufuneka yenzekile- kodwa izakhono zolawulo zisafuneka kakhulu . Kuphela zizakhono zabo ekufuneka zihlaziyiwe ukuze zithelekise imodeli yokuqhuba okanye yangoku yeshishini.
Izakhono zolawulo zizinto eziya kuhlala zifunwa kakhulu, sesinye sezakhono ezifanelekileyo zexesha elizayo.
Ukuqhubeka noku, oku kuyahlaziya, kukuhlaziya okanye ukuphucula izakhono zakho zokuphatha, iiklasi zibekiwe ukuze zinike ulwazi kwabo banomdla. Ewe, nokuba awunazo izakhono ngaphambili kwaye ufuna ukuba nazo ngoku, uhlala kwindawo elungileyo ufunda isithuba esifanelekileyo.
Kulungile ukuba awunakukwazi ukuya kwisikolo sendabuko ukuze ufumane isakhono, mhlawumbi ngenxa yokuba uneshedyuli exakekileyo okanye ngumcimbi womgama. Nokuba yeyiphi na, isisombululo yinkqubo yokufunda umgama okanye imfundo kwi-Intanethi.
1 Yintoni inkqubo yokufunda umgama?
2 Yintoni idiploma yesidanga sokuqala kulawulo?
2.1 Izibonelelo zediploma yokuthweswa isidanga kulawulo lokufunda umgama
3 I-Diploma ePhambili yokuPhumelela kwiNkqubo yokuFunda yokuDala
3.1 I-Diploma yePost Graduate kwiNgozi, iCrisis kunye noLawulo lweNtlekele
3.2 I-Diploma yeGraduate Diploma kwiShishini noLawulo
3.3 I-Diploma yokuPhumela iziDanga kuLawulo lweProjekthi
3.4 I-Diploma yeGraduate Diploma kwiShishini kunye noLawulo loLawulo
3.5 I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo lweMveliso yedijithali
3.6 I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo loThengiso
3.7 Idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lobuchule kunye nobunkokeli
3.8 I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo lwaBasebenzi noPhuhliso
3.9 I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo lwezeMpilo
3.10 I-Diploma yeGraduate Diploma kubuNkokheli noLawulo
3.11 I-Diploma yeGraduate Diploma kwi-Management Management kunye ne-Innovation
3.12 I-Diploma yokuPhumela iGraduate kuPhuhliso lweProjekthi yokwakha
3.13 I-Diploma yeGraduate Diploma yoBunjineli boLuntu kunye noLawulo loKwakha
3.14 I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo lweeDolophu oluzinzileyo
3.15 I-Diploma yokuPhumela iziDanga kuLawulo lweziganeko
3.16 I-Diploma yokuPhumela iziDanga kuLawulo loMngcipheko wezezimali
Yintoni inkqubo yokufunda umgama?
Inkqubo yokufunda umgama luhlobo lwemfundo ehanjiswa kwi-Intanethi kwabo bangenako ukuya kufumana izidanga zabo kwiyunivesithi eqhelekileyo. Akukho mahluko phakathi kokufunda umgama kunye nokufunda kwi-Intanethi. Unokufumana idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo ngokufunda umgama kunye nolunye uhlobo lwesidanga.
Yintoni idiploma yesidanga sokuqala kulawulo?
Idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo yikhosi yolawulo lweshishini eyilelwe ukubonelela abafundi ngezakhono eziya kubavumela ukuba bafumane izikhundla zokuphatha.
Kukho iindidi ngeendidi zezikhundla zolawulo kubandakanya ulawulo lweprojekthi, ulawulo lweshishini, ulawulo lwabasebenzi, ulawulo lomngcipheko, ubunkokeli, ulawulo lweshishini, njl.njl apho unokufumana idiploma yayo nayiphi na kuzo ngokusebenzisa inkqubo yokufunda umgama.
Sele sibhale inqaku elichazwe kakuhle malunga idiploma yesidanga sokuqala kunye nexabiso layo.
Izibonelelo zediploma yokuthweswa isidanga kulawulo lokufunda umgama
Ngokungafaniyo nediploma yesiqhelo ye-PG, idiploma yesidanga sokuqala kulawulo lomgama wokufunda ithatha ixesha elincinci ukuyigqiba
Idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lokufunda umgama wexabiso eliphantsi
Ungazibandakanya nenkqubo yokufunda umgama wokukhangela ukhangele isakhono esitsha okanye ithuba lomsebenzi okanye wandise ulwazi lwakho olusebenzayo kwezinye iinkalo zolawulo.
Unokongeza idiploma njengenxalenye yeziqinisekiso zakho kwi-resume okanye kwi-CV yakho ukuze ubonakale ubuchwephesha ngakumbi kwaye ubeka phambili kukhuphiswano lwabasebenzi.
Idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lokufunda umgama yamkelwe yi-HR nganye kwihlabathi ngokwenza umsebenzi ube lula kuwe.
Ukufunda umgama yinto entsha kwisikolo semveli kwaye abantu abaninzi abavela kwihlabathi liphela bafumana iidiploma kunye needigri ngayo. Nawe unako, emva kwayo yonke loo nto, ingena kakuhle kubomi bemihla ngemihla. Nokuba uneshedyuli exakekileyo, ukuba uzimisele ukuyifumana.
Kule posi, ndize neediploma ezili-16 eziphezulu kwizidanga kulawulo lokufunda umgama ezizakhono ezifunwayo esiqinisekileyo ukuba amashishini, imibutho kwanokuba uya kuyifumana iluncedo kakhulu.
I-Diploma ePhambili yokuPhumelela kwiNkqubo yokuFunda yokuDala
Oku kulandelayo yidiploma esemagqabini yokufumana isidanga kulawulo lokufunda umgama oluya kukwanelisa ngayo nantoni na naphina apho ufuna ukusebenzisa khona ulwazi.
I-Diploma yePost Graduate kwiNgozi, iCrisis kunye noLawulo lweNtlekele
I-Diploma yeGraduate Diploma kwiShishini noLawulo
I-Diploma yokuPhumela iziDanga kuLawulo lweProjekthi
I-Diploma yeGraduate Diploma kwiShishini kunye noLawulo loLawulo
I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo lweMveliso yedijithali
I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo loThengiso
Idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lobuchule kunye nobunkokeli
I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo lwaBasebenzi noPhuhliso
I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo lwezeMpilo
I-Diploma yeGraduate Diploma kubuNkokheli noLawulo
I-Diploma yeGraduate Diploma kwi-Management Management kunye ne-Innovation
I-Diploma yokuPhumela iGraduate kuPhuhliso lweProjekthi yokwakha
I-Diploma yeGraduate Diploma yoBunjineli boLuntu kunye noLawulo loKwakha
I-Diploma yeGraduate Diploma kuLawulo lweeDolophu oluzinzileyo
I-Diploma yokuPhumela iziDanga kuLawulo lweziganeko
IYunivesithi yaseLeicester yeSikolo soShishino lweMigangatho yokuFunda ibanga linikezela ngezifundo zokutshintsha kwezidanga zediploma kwinkqubo yokufunda kumgama umngcipheko, intlekele kunye nolawulo lwentlekele eyilelwe ukubonelela abafundi ngezakhono ezisemgangathweni ebaleni ezisebenza kwiimeko zobomi bokwenyani.
Kuba akukho shishini, mbutho, uluntu kunye nendalo esingqongileyo engenabungozi, oku kwenza abantu baqinisekiswe kule ndawo ngonaphakade kwimfuno ephezulu.
Inkqubo ithatha iminyaka emibini ukuyigqiba kwaye iyafumaneka kuye wonke umntu onemali yokufunda eyi-11,495 Euro.
Le yidiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lokufunda ikhosi enikezelwa yiDyunivesithi yase-Essex Online. Ikhosi, Shishini no Lawulo, yenzelwe ukuphucula ubuchule babafundi kwindlela yokusebenzisa idatha kwizigqibo zengqesho eziza kuzisa utshintsho oluqinisekileyo kumbutho.
Le khosi ye-diploma ekwi-Intanethi ithatha iinyanga ezili-16 ukuyigqiba, ifundiswa kuphela ngolwimi lwesiNgesi kunye nemirhumo yokufunda i-GBP 7,271.
Ekupheleni kwekhosi, uya kufumana izakhono kwi-analytics yeshishini kunye nolawulo lweshishini ngokubanzi onokuthi uqhubeke nokusebenzisa kulo naluphi na uhlobo lweshishini.
Ngaba ujonge polish, ulandela okanye utshintshele kwikhondo lomsebenzi kulawulo lweprojekthi? Ke le idiploma yesidanga sokuqala kulawulo lweprojekthi Ikhosi yokufunda umgama inokuba yeyakho.
Iprojekthi nganye, nokuba yeyiphi na imeko, ifuna umntu ukuba abeke iliso kwinkqubo kunye nenkqubela phambili ukuze afumane iziphumo ezifanelekileyo. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu oqeshwe kwesi sikhundla njengoko kufuna umntu onezakhono ezifanelekileyo kuba iziphumo zeprojekthi ziya kuchaphazela iziphumo zalo mbutho.
Le khosi yediploma inikezelwa yiYunivesithi yoMthetho weSikolo soShishino kwi-Intanethi kwaye inexesha elizeleyo kunye nexesha lexeshana elinokuthatha ukusuka kwiinyanga ezi-6 ukuya kwezi-12 ukugqiba. Kodwa uyakuqonda kwaye ufumane ukuqonda ngokubanzi kwezona ngcinga zibalulekileyo kulawulo lweprojekthi ezisebenzayo nakweyiphi na imodeli yeshishini yangoku. Imali yokufunda yi-GBP 8,000.
Isikolo seShishini seSchellhammer siseMarbella, eSpain kwaye sibonelela ngale khosi ngediploma yakhe yenkqubo yokufunda kude, ukuze ufake isicelo kwaye ufundele uLawulo lwezoShishino kunye noLawulo ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho.
Idiploma inekhetho lesisigxina esigcina unyaka omnye kwaye sifundiswa kuphela kulwimi lwesiNgesi. Ngelixa ufundela idiploma yokufunda umgama, uya kuba nakho ukufikelela kwizibonelelo ezahlukeneyo kubandakanya inkxaso yabahlohli, iqonga lokufunda eluntwini, iiwebhubhsayithi kunye nezinye izinto eziluncedo.
Landela ikhonkco apha ukufaka isicelo se I-Diploma yeGraduate Diploma kwiShishini kunye noLawulo loLawulo.
Iinkampani ezininzi zibone izibonelelo ezininzi ezithi ziveliswe zizinto ezintsha zedijithali kwaye ngelixa amanye amashishini ethe awangena kuwo, amanye akakhange afumane nto.
Oku kuye kwenza abantu nangaluphi na uhlobo lwezakhono zedijithali ezifunwa kakhulu kwaye nawe unokukwazi ukungena kule nto ngokufumana isidanga idiploma kuqeqesho lwemveliso yedijithali, umphathi wemveliso yedijithali.
Inkqubo yediploma ibonelelwa yi-IEBS yeSikolo soShishino, iklasi ifundiswa ngeSpanish kuphela, inexesha elipheleleyo kunye nesantya sexeshana esithatha iinyanga ezili-10 ukugqiba. Imali yokufunda idiploma yi- $ 3,500.
Unomdla wokufumana, ukuhlaziya okanye ukwandisa ulwazi lwakho kulawulo lokuthengisa? Isikolo esikwi-Intanethi se-IPAM sibonisa isidanga sokuqala idiploma kulawulo lokuthengisa Ukufunda umgama apho abantu abanomdla banokuthatha inxaxheba kubo kwaye bafumane ulwazi kulawulo lokuthengisa. Abathengisi, abathengisi, abathengisi beakhawunti, kunye nabanye abaphathi banokuthatha le diploma kwaye bazityebise ngezakhono zokulawula ukuthengisa.
Isantya sediploma lukhetho lwexeshana kwaye kuthatha iiveki ezingama-36 ukugqibezela okukushiya unesakhono sokufunda kunye nesakhono solawulo lokuthengisa.
Ikholeji yaseKhaya yokuFunda yasekhaya ihambisa le diploma yesidanga kulawulo lokufunda umgama, uLawulo lweQhinga kunye nobuNkokheli, ethi ngokusebenzisa indlela yethiyori kunye nokusebenzisa imisebenzi yexesha lokwenyani ixhobise abafundi ngezakhono zokwazi imeko beshishini abasebenza kuyo.
Ikomeleza ukwenziwa kwezigqibo ukuba yeyiphi na izidanga zale khosi ezinokufaka isicelo nakuluphi na useto lweshishini ukugcina ukhuphiswano.
Idiploma ikwi-Intanethi ngokupheleleyo kodwa abafaki-zicelo abanomdla kufuneka babe nenqanaba le-honors kwisifundo esinxulumene noko okanye idiploma yase-UK yenqanaba le-6 okanye amabanga emfundo alinganayo.
Inkqubo ixabisa i-GBP 1,500 kwaye inokukhetha ngokusisigxina kunye nangokwexeshana ekunokuthatha unyaka omnye ukugqibezela.
Landela ikhonkco apha ukufaka isicelo se Idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lobuchule kunye nobunkokeli program.
Idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lokufunda umgama, Ulawulo lwaBasebenzi noPhuhliso Unikezelwa yiYunivesithi yaseManchester.
Le nkqubo ibonelela abafundi ngesingeniso esisebenzayo nesibalulekileyo kulawulo lwezabasebenzi kunye nophuhliso ngokwembono yamazwe aphesheya, efanelekileyo kubantu abachaphazelekayo kwi-HR kumbutho kwilizwe elisaphuhlayo.
Imfuno yokungena yale nkqubo yidigri ye-bachelor's ubuncinci be-2: 1 okanye ilingana nayo, ikwanokukhetha okwexeshana okuthatha iinyanga ezili-18 ukugqiba.
Ngaba ufuna ukuba ngumphathi obalaseleyo kwicandelo lokhathalelo lwempilo? Emva koko kuya kufuneka ungene kule nto idiploma yokuthweswa isidanga kwinkqubo yolawulo lokunakekelwa kwezempilo edibanisa isiseko esinzulu kwimisebenzi yolawulo kunye nesicelo sabo kwimeko yokhathalelo lwempilo.
Idiploma yolawulo lokhathalelo lwempilo inezifundo ezisisigxina kunye nezihamba ngokusisigxina ezithatha unyaka omnye nemibini ngokulandelelana, ukugqiba.
Imfuno yokungena yidigri yonyango okanye inqanaba elilinganayo elinobuncinci be-2.1 kwiziko elamkelweyo.
Imali yokufunda yi-9,305 Euro yabafundi base-UK / i-EU kunye ne-19,760 Euro yabafundi bamanye amazwe.
Ubunkokeli sisakhono esibalulekileyo ekufuneka unaso ukuba ufuna ukutyhala ngokufanelekileyo umbutho okanye iqela liye empumelelweni.
Ukuba ungumphathi ofuna ukuphinda atshintshe izakhono zakhe zokuphatha, kuya kufuneka ufake isicelo soku idiploma yokuthweswa isidanga kulawulo lobunkokeli Inkqubo yokufunda umgama ukuphucula izakhono zakho zobunkokeli.
Unokufaka isicelo nokuba awunguye umphathi okwangoku, ubuchule bobunkokeli buyafuneka nakwimisebenzi yemihla ngemihla, ikwenza ugqame naphi na apho ukhoyo kwaye unokukufumana unyuselo emsebenzini.
Le nkqubo yediploma inikezelwa yiYunivesithi yaseCoventry kwaye abafaki-zicelo kufuneka babambe isidanga se-honors ubuncinci be-2.2 okanye elilinganayo neziko elamkelweyo.
Ubunkokeli kunye nediploma yolawulo inesifundo esinexeshana kwaye ithatha iinyanga ezili-12 ukuyigqiba.
Imali yokufunda yi-16,600 Euro yabafundi bamanye amazwe kunye ne-12,600 Euro yabafundi be-EU / UK.
Ngokuyilwa kwezinto kuyo yonke indawo, isidingo sabaphathi bezorhwebo bayacelwa ukuba bazise ezi zimvo ziqaqambileyo.
Le nkqubo yediploma yenzelwe ukuxhobisa abafundi ngolwazi nezakhono ezifunekayo ukuze babe ngusomashishini ozithembileyo, akhokele iingcinga ezintsha kunye nokwenza izigqibo kumbutho.
Ixesha lenkqubo yiminyaka emibini kunye neemfuno zokungena kwinqanaba lokuqala okanye lesibini lesidanga sokuqala okanye esilinganayo. Imali yokufunda yi-833 yee-Euro ngeekhredithi ezili-10.
Landela ikhonkco apha ukuze ufake isicelo seDiploma yesiDanga Ulawulo loRhwebo noShishino program.
Njengokuba kufuneka abaphathi beeprojekthi kuyo yonke imibutho yeshishini ukongamela umsebenzi weeprojekthi ezenziwayo kunjalo nakubaphathi abafunekayo kwishishini lokwakha. Eli xesha nangona uxhotyiswe ngezakhono nolwazi oluya kukwenza ugqwese kwicandelo lokwakha njengomphathi weprojekthi.
Esi sithuba siphumelele idiploma kulawulo lweprojekthi yokwakha Ukufunda umgama, uLawulo lweProjekthi yoKwakha, unikezelwa yiYunivesithi yaseHerio-Watt kwaye kuthatha iminyaka emibini enesiqingatha ukuyigqiba.
Ubuncinci obufunekayo bokungena kwizifundo kukwinqanaba lesibini leedigri ezisezantsi okanye elilinganayo, umrhumo wokufunda kubo bonke abafundi yi-1,400 Euro kwikhosi nganye kunye ne-1,800 Euro yesifundo.
IYunivesithi yaseHerio-Watt ikwabonelela ngale nto idiploma yokuthweswa isidanga kubuNjineli boLuntu kunye nolawulo loKwakha Inkqubo yokufunda umgama kwaye yahluke kakhulu kule ingentla. Kule nkqubo ufumana izakhono zobunjineli boluntu, oko kukuthi, ufumana ulwazi lwethiyori kunye nolusebenzayo kunye nezakhono zolawulo lokwakha ngokubanzi.
Iklasi yesibini idigri esezantsi okanye isidanga esilingana nayo ubuncinci beemfuno zokungena kwizifundo. Kuthatha iminyaka emi-2 nesiqingatha ukuyigqiba kwaye umrhumo wokufunda yi-400 Euro kwikhosi nganye kunye ne-1,800 Euro yesifundo esisebenza kuzo zonke iintlobo zabafundi.
Iindawo ezisezidolophini zihlala zinabantu abaninzi mihla le njengoko abantu beshiya iindawo ezisemaphandleni behla beza kwezi ndawo befuna amadlelo aluhlaza. Ngenxa yoku, kukho imfuneko yokuqinisekisa ukuba ezi ndawo zasezidolophini zizinzile, ngolawulo, ukuze zikwazi ukumelana nemozulu, ezoqoqosho nezentlalo eziguqukayo.
le idiploma yesidanga sokuqala kulawulo lweeDolophu oluZinzileyo Inkqubo yokufunda umgama, uLawulo lweeDolophu oluZinzileyo, isekwe ukuseka abantu abanomdla abanolwazi ngendlela yokujongana nokuzisa uphuhliso oluzinzileyo kwihlabathi liphela.
Le nkqubo yediploma ikwabonelelwa nge-Intanethi yiYunivesithi yaseHerio-Watt kwaye ifuna ukuba abafaki zicelo abanomdla kule nkqubo babe nesidanga se-2.2 sembeko okanye esilinganayo. Imali yokufunda yi-400 Euro ngekhosi nganye kunye ne-1,800 Euro yesifundo.
Ukhe waya kwiminyhadala ehamba kakuhle okanye embi, nokuba yeyiphi na indlela eya kuyo ixhomekeke ekusebenzeni nakwisakhono somphathi womsitho. Unokuthatha le diploma yesidanga kulawulo lwenkqubo yokufunda kude, Ulawulo lweziganeko, kunye nokufumana izakhono nolwazi oluhlaziyiweyo ukuze ube ngumphathi weziganeko ezifanelekileyo.
Le nkqubo yediploma inikezelwa yiYunivesithi yaseLeeds Beckett kwaye ubuncinci besidanga sokuqala kwinqanaba lesibini leedigri okanye abanamava alinganayo ngaphakathi kwendawo yokusebenza.
Yinkqubo yexeshana ethatha iminyaka emi-2 ukuyigqiba yiyo loo nto imali yokufunda ibalwa ngekhredithi nganye. Imali yokufunda yi-778.40 ii-Euro ngenqaku lekhredithi kubo bonke abafundi base-UK nakwamanye amazwe.
I-Diploma yokuPhumela iziDanga kuLawulo loMngcipheko wezezimali
IYunivesithi yaseLeicester inikezela idiploma yesidanga esisigxina kwinkqubo yolawulo lokufunda umgama, Ulawulo lomngcipheko wezezimali, efuna unyaka omnye ukuba uyigqibe. Kukho umngcipheko kuyo yonke into kwaye kuyo yonke indawo kwaye ezemali yenye yazo.
Unokufunda ubuchule obusebenzayo, kwaye ufumane uhlalutyo oluninzi kunye nolwezemali kunye nezakhono zokuprinta eziya kuthi zibe ngumphathi womngcipheko wemali ofunekayo kumbutho.
Imfuno yezifundo zediploma ubuncinci benqanaba lesibini le-honors okanye elilingana nalo kwiziko elaziwayo elinomxholo wemathematics okanye wezibalo. Imali yokufunda yi-10,445 Euro yabafundi base-UK / i-EU kunye ne-20,825 Euro yabafundi bamanye amazwe.
Oku kuzisa isiphelo sediploma efanelekileyo yokuthweswa isidanga kulawulo lokufunda umgama. Ezi nkqubo zidweliswe apha ziyimfuneko kwaye ngokukhawuleza ziya kukufumanela umsebenzi okanye ukunyuselwa kushishino lwabasebenzi.
Ungathatha nayiphi na idiploma nokuba sele unawo umsebenzi okanye ishishini, njengoko ziyilelwe ukuba zilingane kwishedyuli yomntu oxakekileyo.
Iikhosi zasimahla ze-Intanethi ze-Intanethi ze-Intanethi
Iikhosi ze-100 + zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada ezineZatifikethi
funda kwi-intanethi Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo
idiploma yesidanga kulawulo lokufunda umgama
Okulandelayo Post:Iikhosi ze-18 zasimahla zoLawulo kwi-Intanethi ezineZatifikethi